Mapisarema 139 anoreva vhesi nendima | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Pisarema 139 rinoreva vhesi nendima
Nhasi tichave tichienda kuburikidza nebhuku rePisarema 139, iro rinoreva ndima nendima. Izvi bhuku rePisarema sevamwe vazhinji yakanyorwa naMambo David, mutongi weIsrael, murume anotevera moyo waMwari uye Mambo mukurusa ati amboshongedza pasi. Mapisarema anoratidza kuziva kwaMwari munhu.
Iri Pisarema 139 rinogona kududzirwa senziyo yekurumbidza kuna Mwari nekuziva-kwese. Sevanhu, zviri nyore kwazvo kuwira muchivi, iri Pisarema rinotiratidza kuti Vakatisika uye vanoziva zvatinokwanisa kuita, vanoziva kusava nesimba kwedu, Iri bhuku raPisarema rinogona kushandiswa kuratidza ukuru hwaMwari, hukama hwedu naMwari, kuti akatisika sei zvinoshamisa uye zvinotyisa. Rwiyo urwu runogona kunamatirwa kana tichitya kana tisingazive nzira inotevera yekutora. Zvakare, iri Pisarema rinoratidza kuziva kwakakwana kwaMwari kwemunhu.
Takaziva chokwadi chekuti Mapisarema 139 anonyanya kutaura nezvekukumbira kuna Mwari kuti atiponese kubva pakuzvidzwa kana kunyadziswa, zvakakosha kuti isu tiongorore yega yega rugwaro runoshamisa kuti tinzwisise zviri nani.
Ndima 1-2 Ishe, makandinzvera, nekundiziva. Munoziva kugara kwangu pasi nokusimuka kwangu, munonzwisisa kufunga kwangu muri kure.
Mavhesi aya anogona kushandiswa kubvuma kuvapo kwaMwari muhupenyu hwako, mukuti Mwari anoziva zvese zvinhu, Iye anoziva kupinda kwedu nekubuda, aya mavhesi maviri anogona kushandiswa kuratidza Mwari saMwari anoziva zvese.
Ndima 3-4 Unokomberedza nzira yangu nokuvata kwangu pasi, Unoziva nzira dzangu dzose. Nekuti hapana shoko parurimi rwangu, asi tarira, Ishe, munoriziva rose.
Mavhesi aya anogona kushandiswa kurumbidza Mwari, kuratidza zvakadaro kunakidzwa nekuvapo kwaMwari muhupenyu hwako, kunyatso kuvimbiswa kwako kuti Mwari anemi uye ari padhuze newe, anoziva zvakavanzika zvako zvakadzama kunyangwe usati wazvitaura. Aya mavhesi anogona kushandiswa kunamatira kana zvinoita sekunge zvinhu zviri kukuparadzanisa iwe.
Ndima 5-6 Makandikomberedza shure kwangu nemberi, nokuisa ruoko rwenyu pamusoro pangu. Kuziva kwakadai kunondishamisa kwazvo; yakakwira, handigoni kusvikapo.
Hedge zvinoreva chipingamupinyi chinodzivirira, aya mavhesi anogona kushandiswa kuratidza kuti unovimba naAri kuti atione isu kuburikidza nechikamu chega cheupenyu uye nemamiriro ese akaoma uye kana ari munjodzi. Zvakare kuratidza Mwari kuti tinovimba Naye muzvirongwa zvake zvaAkakuitira uye iwe unoziva kuti Mwari akaisa maoko ake pamusoro pako, hapana anogona kukunetsa kubva unaye Iye sedziviriro yako uye muchengeti.
Ndima 7-9 Ndichaenda kupi kubva kumweya wako? Kana kuti ndingatizirepiko ndibve pamberi pako? Kana ndikakwira kudenga, muripo; kana ndikaita nhovo yangu mugehena, tarira, uripo. Kana ndikatora mapapiro amangwanani uye ndogara kumagumo egungwa;
Mwari ndiye Mwari wese aripo, Iye ari kwese kwese. Aya mavhesi anogona zvakare kushandurwa kunongedzera musiki wedu, kubvuma kuti hutongi hwaMwari ndewechipiri kune umwe. Ndima mbiri idzi dzinogona kushandiswa kudzikamisa pfungwa dzako kuti iwe unoziva Mwari ari pese pese uye anokucherekedza nguva dzose mushure mezvose zvaari kwese kwese. Kunyangwe dzimwe nguva zvichiita senge Ari kusatarisa izvo zvinokumisa kubva pakutsvaga kumeso kwake.
Ndima 10-12 Kunyange ndirwo ruoko rwako ruchandifambisa, uye ruoko rwako rworudyi runondibata. Kana ndichiti, Zvirokwazvo, rima richandifukidza; kunyange nousiku kuchava nechiedza chakandikomberedza. Zvirokwazvo, rima haringavanzi kwauri; asi usiku hunopenya semasikati, rima nechiedza zvakafanana.
Ndima idzi dzinogona kududzirwa serwiyo rwekurumbidza kuna Mwari kuratidza kuti unotenda uye unovimbiswa kuvapo kunogara kuripo kweruoko rwaMwari rwerudo kwauri zvisinei nekwaunenge uri, zvaunoita, uye mamiriro aunozviwana iwe, mukati ndima yekupedzisira, inoratidza kuti kuvapo kwaMwari newe wega kunovhenekera chiedza kungava masikati kana neusiku. Zvinotaridza kuti unotenda kuti Mwari anemi nguva dzose uye anogara achiita kuti chiedza Chake chivheneke pamusoro pako sezvaAkaitira kuvaIsraeri murenje.
Ndima 13-15: Nokuti imi makaumba itsvo dzangu; Makandiruka mudumbu ramai vangu. Ndichakurumbidzai; nekuti ndakaitwa nomutoo unotyisa unoshamisa; Mabasa enyu anoshamisa; uye mweya wangu unozviziva kwazvo. Fuma yangu yakanga isina kuvanzika kwamuri, Panguva yandakaitwa pakavanda, Pakuumbwa kwangu nenjere panzvimbo dzezasi dzapasi.
Ndima idzi dzinogona kunamatirwa kuna Mwari nekuda kwemabasa ake akanaka mukukugadzira izvo zvinoruramisa iyo yakakurumbira bhaibheri bhaibheri "ndisati ndakuumba, ndakakuziva" Iyi ndiyo nzira yekutishevedza kuti Mwari vagara varipo kare uye mushure mekuumbwa kwedu. mudumbu ramai vedu. Haana kungotisika chete, Akatisika akafanana Naye,
14a inogona kushandiswa kurumbidza Mwari, kumurumbidza, kuratidza kuti Mwari Anoshamisa munzira Dzake, Iye muimbi akanaka akakugadzira zvine hunyanzvi kubva mudumbu raamai vako uye uchine mukana wako kwaari.
Ndima 16-18 Meso ako akaona muviri wangu, asi asina kukwana; uye mubhuku renyu, mitezo yangu yose yakanyorwa, yakanga ichiitwa zvakanyorwa, zvisati zvaitika. Mirangariro yenyu, Mwari, inodikamwa sei neni! kwakakura sei kuwanda kwavo !. Kana ndikaiverenga, yakawanda kupfuura jecha, kana ndichimuka, ini ndinemi.
Mwari vane zvirongwa zvemunhu wese, chirongwa chavo ndechekupa munhu wese magumo anotarisirwa, ramangwana rakajeka. Izvi zvinoratidza kuti Mwari ane hanya nesu sei sezvaAkagara achitiudza kuti tiise zvese zvatinoda maari. Ndima idzi dzinogona kunamatirwa kuna Mwari senzira yekuudza Mwari kuti tinoziva Anofunga zvakanaka nezvedu, Anotida, Anotitarisira, Rudo rwake kwatiri harufananidzike, Rudo rwaMwari kwatiri nderwechokwadi. Akagara achitida kunyangwe tisati tasangana naye.
Verse 19-22 Zvirokwazvo muchauraya Mwari, Mwari; ibvai kwandiri, imi vanhu veropa. Nekuti vanokutaurirai zvakaipa, Vavengi venyu vanoreva zita renyu pasina. Ko ini handivengi avo vanokuvengai here, Ishe? uye handina shungu here nevaya vanokumukira?. Ndinovavenga nembengo huru; Vava vavengi vangu.
Aya mavhesi anogona kunamatwa kuti ushande kurwisa vakaipa, vachipokana nemirairo kana rima rinoshanda uye richitaura vachipokana naMwari, avo vanozvidza Ishe mumoyo yavo uye vasina magiya Ake mavari. Ivo vanokupikisa, vanogadzira zvakaipa kwauri, Mavhesi aya anogona kushandiswa kuchema kuna Mwari kuti kuvenga vavengi vedu uye kurwira hondo dzedu.
Ndima 23 - 24: Ndinzvere, Mwari, muzive moyo wangu: ndiidzei, muzive mifungo yangu :: Uye muone kana paine nzira yakaipa mandiri, mundifambise munzira isingaperi.
Mavhesi aya anogona kunamatwa kukumbira Mwari kuti vatendeuke uye vatsvene moyo. Nenzira iyi tiri kupa nzira dzedu kuna Mwari tichimukumbira kuti atitungamirire nenzira yakanaka, yekuudza Mwari izvo zvatinoda kuti atiitire isu, isu tinoda kuti kubata kwake uye ruoko rwake rubate hupenyu hwedu. Zvakare kuudza Mwari kuti atiratidze nzira yechiedza neupenyu hwusingaperi.
Tinoda Rini Pisarema 139
Unogona kuverenga Mapisarema aya kana
Chero iwe paunoda kuratidza zita raIshe, kumunamata, kumurumbidza iye pamusoro pezvaari uye zvinhu zvine simba zvaakaita.
Pese paunoda kunyengetera nekuzvininipisa kose
Kana iwe uchida kuti Mwari vakurire uye vakurwire iwe paunenge uchisangana nematambudziko uye kana vavengi vako vakakumukira
Paunenge uchida rubatsiro kuti unzwisise nzira dzaMwari kwauri
PESI 139 MUNYENGETERO
Ishe Mwari, ndinokuropafadzai nekutora nguva yekusika ini
Ishe Mwari, ndinokuda iwe nekutora nguva yekugadzira ini ndakafanana newe, mumufananidzo wako.
Baba ndinokuropafadzai nekuti ndinoziva kuti ndakagadzirwa nekutya uye zvinoshamisa kuti ndakagadzirwa.
Baba ndibatsirei kuti ndivimbe nemi nguva dzose uye nditende kuti muchagara muchiita zvinhu zvakandinakira
Ishe vandibatsire kuvaka rutendo rwakasimba mauri.
Previous nyayaPISAREMA 136 Mharidzo Vhesi By Vesi
inoteveraPISAREMA 19 Zvinoreva Ndima Ndima
Makumi makumi matatu eminamato yekuporesa ruoko uye chirwere chegumbo
30 Mharidzo Dzemunamato dzinoshanda dzekusimudzira
Minamato Pamusoro peKukundikana Pane Edhi Yekutadza